ကုန်ကြမ်း Levothyroxine (T4) အမှုန့် (51-48-9) hplc≥98% | AASraw
Levothyroxine (T4) အမှုန့်
/ ထုတ်ကုန်များ / Prohormone / Levothyroxine (T4) အမှုန့်
4.50 ထဲက5အခြေခံ2ဖောက်သည် ratings
SKU: 51-48-9. အမျိုးအစား: Prohormone
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ Levothyroxine ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့် (T4) အမှုန့် (51-48-9) မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
L-Thyroxine အမှုန့် ဓာတုထုတ်လုပ်သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုဟာသိုင်းရွိုက်ဂလင်းအတွက်သဘာဝက L-thyroxin (L-T4) ၏ကြောင်းဆင်တူသည်။ L-thyroxin ဟာသိုင်းရွိုက်အတွက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့နှစ်ခုဟော်မုန်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အခြားတဦးတည်းက L-triiodthyronine (L-T3, Cytomel ကိုကြည့်ပါ) ဖြစ်ပါတယ်။ L-thyroxin ရှင်းလင်းစွာနှစ်ခုဟော်မုန်းများ၏အားနည်းသည်။
Levothyroxine (T4) အမှုန့်ကိုဗီဒီယို
Levothyroxine (T4) အမှုန့်ကိုအခြေခံဇာတ်ကောင်
အမည်: Levothyroxine (T4) အမှုန့်
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 235 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
စတီရွိုက်သံသရာအတွက် Levothyroxinepowder အသုံးပြုမှု
Eltroxin; သိုင်းရွိုက်-S က; Levothroid; Levoxyl; Synthroid; Tirosint; Unithroid; Eltroxin; Levothyroxine ဆိုဒီယမ်, Synthroid ။
(T4 အမှုန့်) Levothyroxine အမှုန့် (CAS 51-48-9) အသုံးပြုမှု
အဆိုပါ Levothyroxine / T4 mormal လူတို့အဘို့, အသုံးပြုသောပါးစပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာရေတိုသံသရာအဘို့, 100 ရက်သတ္တပတ်ပတ်လည်ရှည်လျားသောသံသရာ, 150-6 ရက်သတ္တပတ်အဘို့, တစ်ရက် 12-16mcg မှာ run ရပါမည်။
(T4 အမှုန့်) levothyroxine အမှုန့်အပေါ်သတိပေး
you armodafinil တွင်သို့မဟုတ် modafinil မှမဆိုပါဝင်ပစ္စည်းမှမတည့်ကြသည်။
you armodafinil သို့မဟုတ် modafinil ယူပြီးနောက်အဖုဖွံ့ဖြိုးဆဲတဲ့သမိုင်းရှိသည်။
သငျသညျအခြို့သောနှလုံးသို့မဟုတ်နှလုံးအဆို့ရှင်ပြဿနာများ (ဥပမာ, mitral valve prolapse, လက်ဝဲ ventricular hypertrophy) ၏သမိုင်းရှိတယ်
(အဖု, အသင်းအဖွဲ့ချုပ်; ယားယံ; အခက်အခဲမျိုချသို့မဟုတ်အသက်ရှူ; ရင်ဘတ်အတွက်တင်းကျပ်စွာ; ခံတွင်း, မျက်နှာ, နှုတ်ခမ်း, လည်ချောင်း, ဒါမှမဟုတ်လျှာရောင်ရမ်းခြင်း, ပုံမှန်မဟုတ်သောအသံပြာ); ရင်ဘတ်နာကျင်မှု; အစာရှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်မမှန်နှလုံးခုန်; အဖျား, ချမ်းတုန်, ဒါမှမဟုတ်လည်ချောင်းနာ; စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, ခံစားချက်, ဒါမှမဟုတ်အပြုအမူအပြောင်းအလဲများကို (ဥပမာကျူးကျော်, လှုံ့ဆော်မှု, စိုးရိမ်စိတ်, စိတ်ကျရောဂါ, သုခချမ်းသာ၏ပုံကြီးချဲ့အသိ, စိတ်အာရုံချောက်ခြားခြင်း, ယားယံခြင်း, ကွော); ကြွက်သားသို့မဟုတ်ပူးတွဲနာကျင်မှု; အသက်ရှုမဝြခင်း, သတ်သေအတှေးသို့မဟုတ်လုပ်ရပ်များ; ခြေထောက်ရောင်ရမ်းခြင်း, အသည်းပြဿနာများ (ဥပမာ, မှောင်မိုက်ဆီး, ဖြူဖပ်ဖြူရောထိုင်ခုံလုပ်ဖို့, အစာစားချင်စိတ်များ persistent ဆုံးရှုံးမှု, Right-တဖက်သတ်အစာအိမ်နာကျင်မှု, အရေပြားသို့မဟုတ်မျက်စိအဝါရောင်) ၏ရောဂါလက္ခဏာများ; ပုံမှန်မဟုတ်သောကွိတျသို့မဟုတ်သွေးထွက်; အန်; အားနည်းခြင်း။
ပေါ်မှာဖြစ်ခြင်းနေချိန်မှာသင့်ရဲ့ဇီဝြဖစ်အလွန်တိုးတက်နေပါတယ်ကတည်းက Levothyroxine ဆိုဒီယမ်ဟာအကောင်းဆုံးအဆီ burner ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ဇီဝြဖစ် haywire သွားကတည်းကသင်ကယ်လိုရီတွေအများကြီးထဲမှာယူပြီးကြသောအခါနေဆဲအဆီမီးရှို့မည်ကတည်းကသင်က Pre-ပြိုင်ပွဲ Diet အပေါ်အနည်းငယ် sloppier ဖြစ်မတတ်နိုင်နိုင်ပါတယ်။ ။ ဒီလိုအစာစားချင်စိတ်ဖိနှိပ်မှု, အိပ်ပျော်လျော့နည်းလိုအပ်ချက်နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြာရှည်ခံမှု (သက်လုံ) ၏တိုးမြှင့်အဖြစ် T3 အတူကအလွန်ယှဉ်ပြိုင်စေသည်ရာအချို့နဲ့အခြားထူးခြားတဲ့အားသာချက်များရှိနေကြသည် "ဟု သာ. ကောင်း၏ထားတဲ့" ဒါကြောင့်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုသင့်ရဲ့ပန်းတိုင်များကိုပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ထို့ပြင် "ဟုအဆိုပါအမျိုးအစားကိုဖော်ပြကြောင်းကိုယ်တွင်းအင်္ဂါ2ပလာစမာ T3 အပြင်မှာရှိတဲ့ဒေသအလိုက်နေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ T3 ကိုအသုံးပြုဖို့ deiodinase နှင့်ဤအင်္ဂါ plasma T3 ၏မရှိခြင်းအတွက်ဇီဝကမ္မ intracellular T4 အဆင့်ဆင့်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမည်မဟုတ်ကြောင်းသီအိုရီစိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိ
T4 အမှုန့်ကိုဝယ်ခြင်းငှါဘယ်လို: AASraw ထံမှ levothyroxine အမှုန့် (CAS 51-48-9) ဝယ်ဖို့